I-China Polycarboxylate Superplasticizer Abenzi Nabahlinzeki | I-Divenland
I-Polycarboxylate based Superplasticizer uhlobo olusha lwe-super plasticizer olwenzelwe ukufanele amaphrojekthi wobunjiniyela ngaphansi kwezimo zezulu ezahlukahlukene futhi ikakhulukazi ukusebenzisa endaweni eshisayo yesimo sezulu enoketshezi nefomu lempuphu.
Kungukunciphisa okuphezulu kakhulu kwamanzi okuphezulu emakethe lapho isilinganiso sokunciphisa singakhuphukela ku-35-40%. Ngenxa ye -Low chloride yabo nokuqukethwe kwe-alkali, akukho ukugqwala ku-iron-bar, ukuzinza okuphezulu & nezinhlamvu ezinobungane bemvelo nezingezona ezinobuthi, bamukelwe ngemfudumalo kukhonkolo lwamandla aphezulu wesitimela, indawo yokuhamba, ithrafikhi, ibhuloho namandla kagesi, bathole impendulo enhle evela amakhasimende emhlabeni jikelele. Kuyinto superplasticizer enhle kakhulu ku-premix yokwakha nokhonkolo endaweni yokuphonsa endaweni.
1. Ilungele ukhonkolo wokusebenza okuphezulu, ukhonkolo wokugeleza okuphezulu, ukhonkolo wokuqina okuphezulu, ama-castable okhonkolo okuyisisekelo kakhonkolo, ukhonkolo ophilisa ukhonkolo, ukhonkolo ozimele kanye nokunye.
2. ilungele impahla ye-grouting, i-self-leveling floor, imikhiqizo ye-gypsum, umthengisi ohlanganyelwe, udaka lwamandla aphezulu nokunye.
3. ilungele ngokukhethekile usimende okhethekile onamandla amakhulu nokugeleza okukhulu
ukubukeka Impunga ephuzi emhlophe ephuzi noma empunga
kwabantu abaningi 350-500 kg / m3
umswakama % 3%
ukulahlekelwa ngokushisa ≧ 85%
i-Fineness （0,315mm ≧ 90%
Okuqukethwe kwe-chloride (%) ≦ 0.1
Izinga lokunciphisa amanzi lodaka ≧ 20%
I-0.15-0.40% (Ngokuya ngesilinganiso sesisindo sezinto zokwakha usimende)
Olandelayo: I-Silicone Hydrophobic Powder